मध्यरातमा जोडी सुतेको कोठामा क्यामेरा बोकेर पुगे युट्युवर, कता जाँदैछ हाम्रो समाज ? (भिडियो हेर्नुस्) – Dainik Samchar
August 16, 2021 414
काठमाडौ । अहिले युट्युवमा श्रीमाा श्रीमतीका विवाद र वहुविवाह लगायतका विषय हेडलाइन बन्ने गरेका छन् । कसको श्रीमती को संग गयो ? रंगेहात कोठामा पक्राउ परे लगायतका भिडियो ट्रेण्डिङमा आउने गरेका छन् । पत्रकारीताको मर्म र क्षेत्रमै नपर्ने यस्तो घटनाहरुले सामाजिक सञ्जाल र युट्युव ढाकेका छन् । नितान्त ब्यक्तिगत जीवनमा प्रवेश गरेका युट्युवरहरुले प्रहरीले जस्तै कोठा कोठामा छापा मार्ने गरेका छन् ।
एउटा क्यामेरा लिएर अरु सुतेका कोठामा लेन्स घुमाउँदै पुग्ने युट्युवरले महिलालाई सोध्ने प्रश्नले वास्तवमै यो समाज कता जाँदैछ भन्ने देखाउँछ । तपाईको लसपस यो पुरुषसंग मात्र हो की अरु पनि छन् तपाईका केटा ? पत्रकार दावी गर्दै अरुको कोठामा छापा मार्न पुगेका युट्युवरले महिलालाई सोधेको प्रश्न हो यो ।
Prevआखाभरि आशु पार्दै अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीले सम्झिए ओलीलाई !
Nextनरिवलको तेलमा यो एक चीज मिलाएर कपालमा लगाउनुहोस्, केही दिनमै देख्नुहुनेछ चमत्कार